हरप्रहर डेस्क प्रकाशित मिति: २०७८ माघ १४, शुक्रबार (३ महिना अघि)
हेमन्त राणाको यो गीतले भनेजस्तै उमेर छँदै परदेश पसेकाहरू उमेर ढल्केपछि घर फर्कन्छन् । वैंसमा नै छाडेकी जीवन संगिनीको कपाल फुल्न थालिसकेको हुन्छ, आउँला र रमाउँला भन्ने आशा गीतले भनेजस्तै उमेर ४० कटेपछि नै सम्भव हुन्छ ।
कलकलाउँदो उमेरमा पालेका रहरहरू जीवनको तेस्रो घुम्तीमा छल्किरहन्छन्, झल्कीरहन्छन् । भूतकालमा टुटेका सपनाहरूले भत्भती बुढेसकालमा बेस्सरी पोलिरहन्छन् ।
सबै जना पासपोर्ट बनाउने उमेर पुगेपछि रहरले विदेश जाँदैनन् । अधिकांश कहरले जानुपरेको छ । देशभित्र देखिएका नमिठा यथार्थ भित्रका प्रत्यक्ष दृष्टान्तहरूले देशभित्रै जागिर गरेर जिउन सकिन्छ भन्ने साहस र आश दुवै कम हुँदा युवा विदेश पहलायन हुन बाध्य भएका छन् । युवा विदेश पहलायनको कारण यो मात्र होइन । देशभित्र भइरहेका घुसखोरी, भ्रष्टाचार, अस्थिर राजनीति, नातावाद, कृपावादले पनि युवा पलायनलाई उत्प्रेरित गरिरहेका छ ।
परदेशका आँगन, गल्ली, फराकिला सडक, सपिङ महल, आलिसान बंगाला, श्रमिक क्याम्पमा भेटिरहने नेपालीहरूको गुनासोले परदेशका सकरात्मक पाटाहरूलाई स्वदेशमा पूरा हुन नसकेका सपना, पारिवारिक र सामाजिक बिछोडले एकैछिनमा विस्थापन गरिदिन्छ ।
अन्यायमा परेकाहरू न्याय पाउँदैनन् । अपराध गर्नेलाई सजाय हुँदैन अनि कानुन कसको लागि भन्ने विषयले नेपालमा बेला–बेलामा चर्चा पाइरहन्छ । परदेशमा आफ्ना नागरिकलाई परिवार र आफ्नो जीवनगुजाराका लागि इमान, जवान र स्वाभिमानलाई बन्धकी राख्न विवस बनाउने नेता र सरकारलाई लज्जा छैन ।
यूएईको केही समयको बसाइमा एक जना पाकिस्तानीसँगको भेटमा यो पंक्तिकारको ठूलो चर्काचर्की भयो । मुस्लिम धर्मका सिया समुदायभित्रका मुहमबद इद्रीससँगको विवाद धर्म हुँदै विकाससम्म पुग्यो । हुन त कुनै पनि देशको विकाश र कानुनको लागि धर्म, रीतिरिवाज र संस्कारले ठूलो भुमिका खेलेको हुन्छ ।
उनको तर्कमाथि केही प्रतिवाद गरेँ । उनको भ्रमलाई चिर्ने प्रयास गरेँ । उनले भनेका केही शब्दहरूले बेस्सरी घोच्यो पनि । कस्तो देशको नागरिक भएर जन्मिएछु ? प्रश्न पनि मन उठ्यो।
विदेशमा पसिना र रगत बगाउने नागरिकलाई मात्र देशको राष्ट्रियता र मायाको चिन्ता हुनुपर्ने हो कि देशमै बसेर ठूलाठूला भाषण गरी जनतालाई आँखामा छारो हालिरहने नेताहरूलाई पनि हुनुपर्ने हो ? आफैँलाई मनमनै प्रश्न गरेँ ।